U-Emmanuel Macron osengozini - I-Thumela RELAY PRESS REVIEW%
By brylandobe On Agasti 13, 2020
Ngo-2022, u-Emmanuel Macron akafuni ukuyiyeka indawo yakhe njengomongameli kalula kanjalo. Njengoba kunesikhathi seminyaka emihlanu eyenzeka ngama-vests aphuzi, i-coronavirus kanye nemicimbi yakamuva, u-Emmanuel Macron usaqhubeka nale nkambo.
Lapho ebhekene nokugunyazwa ukuba ngumongameli kuka-2022 kukaMongameli weRiphabhulikhi, iqembu lakhe eliya ngokuya likhathazeka.
U-Emmanuel Macron: ubuqiniso obunokwenzeka ngo-2022?
Imithetho emisha eNetherlands ukubhekana nokwanda kwe ...
Ungqongqoshe waseZimbabwe usola iqembu eliphikisayo ngokushushumbisa ...
Amasosha aseSudan "ahlehlisa ukuhlasela kwamavukelambuso ...
Ngayo yonke le micimbi, ngeke sithi u-Emmanuel Macron ufuna ukuvumela noma ngubani nje. Lokhu kubuye kubuye kubuye kabusha kuhulumeni eminyakeni emibili yokugcina yesikhathi sakhe seminyaka emihlanu. Futhi ngenkathi ethatha izintambo zombuso njengenhloko yezwe, u-Emmanuel Macron uhlangabezane nezikhathi eziphansi nezimbi.
Phakathi kwezindawo eziphuzi kanye ne-coronavirus, uMongameli weRiphabhulikhi wazama ukuphatha izinhlekelele ezahlukahlukene ngangokunokwenzeka, kepha akazange aphumelele njalo ekuthuliseni izixuku. Ebhekene nokwaziwa kwakhe ngo-2022, inxusa lika-Emmanuel Macron likhathazekile ... Ikakhulu uma u-Anne Hidalgo enquma ukuqhuba futhi ...
U-Anne Hidalgo: ungumphikisi owesabekayo futhi owesabekayo?
Ngokhetho lwakhe ezimbili njengeMeya yaseParis, u-Anne Hidalgo ungumuntu oqinile kwezepolitiki. Lona ngaphandle kokwehlula uRachida Dati, undunankulu wezibhamu kwezepolitiki. "Isibindi sikaMacron sibheke uHidalgo, nakanjani," kuchaza iPhini likhulu leLe Parisien. "Ungusopolitiki oqinile, onqobile okhethweni ezimbili eParis, owazi imikhankaso, abezindaba ...".
Amaphini amaningana kanye namalungu ePhalamende avumelana ngephuzu elifanayo: ukungabukeli phansi u-Anne Hidalgo. Futhi noma ngabe iMeya yamanje yaseParis iveze ngoJulayi 23 ukuthi ayifuni ukumela ukhetho lukamongameli lwango-2022, amalungu eLa République En Marche aqhubeka nokusola u-Anne Hidalgo.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku-: https://onvoitout.com/emmanuel-macron-en-danger-ses-proches-plus-inquiets-que-jamais/
UBir Kadın: Fatmagül Berktay - Ividiyo
U-EYINDI KOFFY OLOMIDE UTHOLA NGOKUFANELEKA NGOKUFANELEKILE KWE-INNOS'B NGOKUQINILE I-IPUPA YALANDELA NGOKUQINILE YONKE IQINISO LEMPUMELELO - Ividiyo
Imithetho emisha eNetherlands ukubhekana nokwanda kwegciwane
Ungqongqoshe waseZimbabwe usola ukuphikisana nokushushumbisa izikhali
Amasosha aseSudan "akuchithile ukuhlaselwa kwamavukelambuso eDarfur"
Ukufa okuyisimangaliso kwamakhulu ezindlovu kuxazululiwe
Okwangaphambilini Olandelayo 1 kwezingu-31